Bird Park | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Home & Garden » Bird Park
Posted by ဇီဇီ on May 7, 2013 in Home & Garden, Photography | 32 comments
ဓာတ်ပုံတင်တိုင်း ပြဿနာတက်နေတာ တောင်းပန်ပါရဲ့။
ခုဟာက ကိုရဲစည် ပြင်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။
ရိမ်းဘိုး ကြက်တူရွေး ဆိုလားပဲဗျ
ဒီ အကောင်က နာမည်မေးတာမဖြေဘူးဗျာ။ ပြူးကြည့်နေတယ်
သက်တန့် ပဲရော့။ ဟီးဟီး
ဒါကတော့မသိ။ တွေ့တာကို အမြန်ရိုက်လာတာ။
မင်း ရှေ့မှာ ငါ ဒူးထောက်ပြီ ဆိုတဲ့ ဝိုင်ဝိုင်း သီချင်း ဆိုချင်လာတာပဲ။
ဝန်ပိုမျိုးလား ဒုံးစပ် မျိုးလား မသိဘူး။
အဝါရောင်လေးက ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲကွယ်။ မင်းရဲ့ နဘေးနားရပ်နေတာ ငါ တွေ့လိုက်တယ်။
Kingfisher တဲ့။ အရှေ့က အမျိုးကွဲတယ်။ မမှတ်မိဘူး။ ဟီးဟီး
အဖိုသေရင် အမပါ လိုက်သေတဲ့ အောက်ချင်းငှက်ပါဗျာ။
ချစ်ရပါသော ငှက်၊ သိန်းငှက်.. နေပုံက ခန့်တယ်နော်..
နာ့ ဟာ နာ တစ်ကောင်တည်း။ ဘာဖြစ်တုန်း။
တစ်ကောင်တည်း၊ ဒါမဲ့ သိန်းငှက်တဲ့။ ဒီရွာထဲက လူပျိုကြီးနဲ့ တူတယ်။
ဟဲ့၊ အံစာတုန်း။ ကောင်မလေးက နင့်ကို မတွေ့ချင်တော့လို့ ခေါင်းဝှက်ထားပြီလေ။
ရေပြင်နား ထိုးဆင်းတာ ဒီပုံရဖို့ ချော်လဲပါတယ်။
အစက ငြိမ်လွန်းလို့ အရုပ်မှတ်နေတာ
ပင်ဂွင်းတွေ ကို အစားကျွေးနေကြတာ။
သူကတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတာ။ ကိုယ် က သူ့နှုတ်သီးကြီး သူ့ပြန်ထိုးမိမှာကြောက်လို့
ဟယ်။ ဟို တစ်ယောက်လိုက်တာမရလို့ ဒီ နားရောက်လာပြန်ပြီ……..
လမ်းသရဲ ပဲ။ ခေါင်းစုတ်ဖွားနဲ့ ချစ်လို့။
ဖလီမင်းဂို လို့ သိတာပဲ။ ပန်းရောင် အုပ်လိုက်က အတော်များတယ်။
ကြက်တူရွေး အဖြူတွေ။ သူတို့က ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတဲ့ အကောင်တွေ။
သူတို့က ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတဲ့ အကောင်တွေ။
ဇီးကွက်တွေ မို့ မြင်ဘူးတယ် ဆို မသွားပဲ နေမို့။
အဲဒီအဆောက်ဦးက အမှောင်ထဲထားတာဆိုလို့ သွားကြည့်လိုက်တယ်။
ဒီတစ်ကောင်ပဲ ထူးဆန်းသလိုပဲ နှင်း ဇီးကွက်ခေါ်မှာပေါ့။
မှောင်လို့ ဖလက်(ရှ)သုံးမိလို့ ပြောခံရသေး။ သူတို့ မျက်လုံးက မခံနိုင်ပါတဲ့။
ဟောင်ကောင်သားကြီး ပိန်အောင် ရေကူးနေတာတဲ့။
Crowned Pigeon ဆိုပဲ။ သရဖူဆောင်းထားတဲ့ ခိုပေါ့လေ…
ဘာငှက်မှန်းမသိ ချောင်းရိုက်လာရတာ။ ပေစောင်းစောင်းနဲ့။ ချိန်တာ ကြာလို့ ပျံပြေးတာနဲ့ နောက်လူက မျက်စောင်းထိုးတာ သူ့ကြောင့်ပေါ့။
အန်းနီးဝေး ကျေးကျေး ၊
ဘယ်လိုခေါ်တုန်းဆိုတော့ ငှက်လို့ပဲ ခေါ်တယ်။
ပုံတွေက ခုလို မြင်ရမှ လန်ထွက်နေမှန်း သိတော့တယ် …
ငှက်မျိုးတွေကလည်း စုံပါ့ ..
အရောင်အသွေးလည်း စုံပါ့ ….
မိုက်ဒလယ် … ဂွတ်ရှယ် ..
အကူအညီတောင်းမယ် ဆို ပေါ်မလာဘူး။
အဲ့ အရောင်က အပြင်မှာပိုလှတယ်..
အောင်မြလေးးးး အာ့ခုမှဘဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါဘီတော်…
အပြာရောင် ကြက်တူရွေး လှလိုက်တာ အောက်ဆုံးရဲ့ အထက်က ပုံထဲက ငှက်ကြီးက မမဂျီးကို ပဲတွေ ပေးနေတာ .. သူက ပြုံးနေသလိုဘဲနော် မမဂျီးကလည်း အ၀ါရောင်ကြက်တူရွှေးလေး မိဗုံအတွက် တိတ်တိတ်လေး ဖမ်းလာခဲ့ပါလားးး ချစ်ချာလေးး
ဗုံ တို့ ခိုင်းလိုက်ရင် နာ ကို လက်ကောက်ဝတ်ကိန်းချည်းပဲ။
အခိုင်းတော်တဲ့နေရာ အဲဒီဗုံက ပထမပဲ။
ဒါပေသိ ဌက်အမည်လေးတွေ ဓာတ်ပုံမှာဖော်ပြပေးရင် အရမ်းကောင်းသွားမယ်ထင့်။
အဲဗျာ ဒီ မေးခွန်းမေးသူများနေပြီ။
နာမည် အမှန်ကို မသိရင် ရွာထဲက နာမည်တွေ ပေးပစ်မယ်။
ကြက်ဖြစ်ရင်ကွယ်.. ငှက်ဖြစ်ရင်ကွယ်.. တစ်ကိုင်းတည်းနားနေချစ်တဲ့ စိတ်တွေမယ်…
ဆိုတဲ့… နိမိတ်တွေ.. နိမိတ်တွေ…
ဒေါ်ဆွိ ပုံတွေမှာ တွေ့နေရတယ်လို့…
အဲတာပဲ မြင်မှာပေါ့။ ကိုရင်က အများကြီးထဲကမှ တူ၂ ကို ပုံကို ရွေးကြည့်လို့နေမှာ။
အဲတော့ ကိုရင် ထူးခြားတော့မဲ့ သဘောပဲ။
အောက်ဆုံး တပုံရဲ့ အထက်က မဲမဲကောင်က ဘဒူယဲ ???
ဘာမှန်း၊။ ပင်ဂွင်းတွေနဲ့ ရောထားတာ။ ဒီ ငှက်ကို။ အမျိုးနေမှာ …
ငှက်တွေတင်ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်တစ်ခါ ငါးတွေတင်ပေးအုန်းနော်.. ငါးလေးတွေအရမ်းလှတယ်.. တချို့ ငါးလို့ တောင်မထင်ရဘူး.. ဗီဒိုတော့ဆွဲထားတယ်..ဓါ့ပုံမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး.. နောက်တစ်ခါ စင်ကာပူက လက်ရှိနာမည်အကြီးဆုံးအစားအသောက်တွေတင်ပေး.. ကြည့်ပြီးသားရေကျလို့ ရအောင်
တိန် !!! တိန် !!! တိန် !!!
ပုံအောက်ကစာတွေ လိုက်ဖတ်တော့မှ သိရတော့တယ် ….
အော် .. နာ့ မမဂျီးဒွေ အတော် ချစ်ရှာသားပဲ …
အိုက်ပုံ မြင်လိုက်ရဒေါ့ ရင်ထဲ ထိတွားဒယ်ဂျာ …
ကျေးဇူးတင်စကား အရင် ပြောပါရစေ။
ကိုယ့်မောင်ဂလေးကို ချစ်နွန်းနွံ့ မရ ရအောင် လိုက်ခိုင်းထားရတာရယ်။
ဒါနဲ့ ဟို လူဂျီးပုံတွေ့သလား။
ကျုပ် ဥငေးကို ပေါဒါရား ..
ပိန်အောင် ရေကူးနေဒါဆိုလား ဘာဆိုလား ..
တောက်စ်… သဂျီးဆီက တကယ်မရတဲ့ ၂၀ကို မလိုချင်လို့ မမန့်ပါဘူးဆိုမှ…
ရွာထဲတက်ပြီး ၆ကျပ်ခွဲတဲ့ ဟမ်ဘာဂါ ၂လုံးငုံထားသူကြီး…
ကျုပ်ဟာကျုပ် ဆူဆူဖြိုးဖြိုးချစ်စရာလေးကို ဂျေမဝင်ပါနဲ့….
မကြေနပ်ရင် ရေပြိုင်ကူးမလား… ပြော ပြော… အား ဟိ
အသားလေးတွေ ဖြူသွားအောင် ရေကူးခိုင်းထားတာပါရယ်
ဇာကြီး ရဲ့ လှပတဲ့ ငှက်ပုံတွေ ကို ကြည့်မိမှပဲ
အခုခေတ် ကလေးတွေ ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံတွေ ဘယ်ကနေ ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာ
အ၀ါမှအ၀ါပဲ..အခုမှ အပြုံးလေးက ပိုတောင်လှသွားသေးတယ်..အရမ်းချစ်။
နာမည်မေးတာ မဖြေတဲ့အကောင်လေးကိုလည်း ခုနကတည်းက မြင်မြင်ချင်း
အဝါရောင်လေးက ဘယ်သူလည်း ဘယ်ကလည်းကွယ်။
နှင်းနှင်းဘေးနား ရပ်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်။
(ရေပြင်နား ထိုးဆင်းတာ ဒီပုံရဖို့ ချော်လဲပါတယ်။)
ငှက်ပျံနေတဲ့ပုံ ရိုက်ချင်တာ တခါမှ မရဖူးလို့ ခိုင်ဇာရိုက်ထားတာကို အားကျနေတာ။ :hee:
ဒီတစ်ခေါက် အတောင်ပံဖြန့်တဲ့ ပုံလေးတွေ တော်တော်များများ ရလိုက်တယ်။
တံတားက ချောနေလို့ရယ်၊ ဖိနပ်က မြင့်တော့ရယ် မြင်ကွင်းကောင်းတဲ့ နေရာပြေးရတာ။
ချောလဲလို့ ထွက်မဲ့ အသက်ထက် မကိုင်စဖူးကိုင်ထားတဲ့ ကင်မလာကလည်း အရေးကြီးသေး။ ပြန်မလျော်နိုင်တော့လေ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကင်မလာ ဝေဝါးဝါးလေးနဲ့ပဲ ရိုက်တော့မယ်။
အဲသလို လှောင်အိမ်ထဲကငှက်၊ အလှပြကန်ထဲကငါး၊ သံတိုင်နောက်က တိရစ္ဆာန် အကောင်ပလောင်တွေ မြင်ရရင် စိတ်မချမ်းသာဘူးကွယ်…။ နင်တို့နော် ကိုယ်တိုင် မခံစားကြဘူးလို့ ကြည့်ကောင်း မျက်စိပဒါသ ဖြစ်တယ် ထင်နေကြတယ်… ကြောက်တယ်ဗျို့ ကံ ကံဂျီးကို….
မမြင်ရတော့ လည်း မမြင်ရလို့
မြင်ရပြန်တော့လည်း လေးဂွနဲ့ ဆော်ချင်တယ်
မမြင်ရတာကိလေသာ သူ့ ဟာသူငြိမ်း၏ တ့ဲ
အောင်ကြူးစကားမှမဆုံးခင် ငှက်လေးတွေကို လေးဂွနဲ့ ဆော်ချင်သူပေါ်လာပြီ။
လှောင်အိမ်ထဲမှာ မနေပဲ အပြင်မှာနေမိလို့ အောင်ကြူးစာ မိမှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ်တဲ့။
ဂါး ဂရား ဆို ခုန်အုပ်မှဖြင့်။
မြင် မြင်တယ်၊ ကြား ကြားတယ် လို့မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့မှပဲ ကေဇက် ရဲ့ ငှက်ပုံတွေမြင်ရတော့တယ်ဗျာ..
လှလိုက်တဲ့ သဘာဝရဲ့ ဖန်တီးချက်တွေပဲနော..